Hoos u dhaca Sarrifka iyo Saamayn la’aanta Badeecadaha iyo Quutal-daruuriga | Dhaymoole News
Hoos u dhaca Sarrifka iyo Saamayn la’aanta Badeecadaha iyo Quutal-daruuriga
Berhayanba waxa hoos u dhac aad u ballaadhani ku imanayey qiimaha sarrifka ee lacagta Dollarka, Arrintan ayaa walwal iyo jah-wareer ku abuurtay dad badan oo ka tirsan bulshada reer Somaliland.
Waxaan dhawaan akhristay war lagu qoray mid ka mid ah Jaraa’idada maxallliga ah ee ka soo baxa dalka, Warkaasi wuxuu sheegayey inuu Madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland Mud. Axmed Maxamed Maxamuud (Siilaanyo) kaga hadlay khudbad sannadeedkii Distooriga aheyd ee uu Sannadkan u jeedinayey Goleyaasha Baarlamaanka, kor u kaca qiimaha Sarrifka oo sida Warku sheegay uu madaxweynuhu khudbaddiisa kusoo daray inay baadhis ku samayn doonaanka Dawlad ahaan,bal inay qayb ka yihiin adeegyada( Edahab iyo Zaad) kor u kaca qiimaha Sarrifka ee lacagta Dollarka, Sidoo kale, isla warkaas waxa iyana lagu sheegay inay jiraan niman Sarrif-layaal ah oo kooto(xuurto) ku haysta Sarrifka.
Muddo yaruun Warka dabadii waxa si-isdaba joog ah hoos ugu dhacayey oo maalinba maalinta ka dambaysa sii qiimo beelayey lacagta dollarka.Maalintii aanWarkaas ka akhriyey Jaraa’idka, Sarrifku wuxuu marayey($1=7800SLSH) gacanta hore, halka gacanta danbena uu ka marayey ($1=8000SLSH), Maanta waxay maraysaa gacanta hore ($1=6000SLSH), tan dambena ($1=6200SLSH), Taas macnaheedu waxa weeyaan in qiimaha Sarrifka ee gacanta hore uu kor u kacay (76.9%) ku dhawaad boqolkiiba todoba iyo todobaatan, Tan dambe, ayaa iyana noqonaysa (77.5%), boqolkiiba todo iyo todobaan iyo badh.
Haddaba, marka la eego qiimaha intaa le’eg ee uu Sarrifku hoos u dhacay, waxaad dareemi kartaa inuu yahay mid aan caadi aheyn.Waxaan aqoonsanahay, in arrintan qiima dhaca ah ee aan caadiga ahayni ay ka dhalatay ama ay salka ku hayso laba qodob oo kaliya: 1. Dareenka dhashay hadalkii Madax-weynaha Jamhuuriyadda Somaliland.
2.Hadal ay maalmahaas isla dhexmarayeen Dadweynaha reer Somaliland gaara haan reer Hargeisa oo ku saabsanaa Sarrifka iyo in Sarrifleyaasha la xidhidoono.
Sidaa daraadeed, waxa habboon in aan iswaydiino su’aasha ah, maxaa looga danleeyahay hoos u dhaca Sarrifka? Horta,waxa markiiba maskaxdaada kusoo dhacaysa in aad heli doonto alaabjaban.Taasi waa run oo shaki kuma jiro, haddii arrintaasi tahay mid dhab ah inuu jabayo wax kasta oo ku xidhan ama ku qiimaysan lacagta dollarka. Laakiin, waxa layaable innaga arrintaasi meesha way ka maqantahay waayo shay kastaa waxa uu taaganyahay oo lagu iibinayaa qiimihiisii hore.Waxa la ogyahay maanta in aanu wax xidhiidh ahi ka dhexayn hoos u dhaca qiimaha Dollarka iyo Badeecadaha iyo cuntooyinka taasina ay meesha kasaartay ujeedadii laga lahaa hoos u dhaca ama jabitaanka Dollarka.
Haddaba, waxaan leeyahay waa been, dhac iyo kutidhi ku teen iyo waliba sasku dhacay Sarrifleyaasha iyo bulshada , laakiin maaha Jabis run ah. Annigoo ka duulaya laba qodob: 1. Alaabooyinkii kuqiimaysnaa Dollarka oo halkoodii taagan hadday maciishad tahay iyo haddii kaleba
Dadkii oo ka yaacaya lacagtii SLShillinka oo ku baddalaya lacag Dollar ah illayn waxay ogyihiin inuu berriba halkiisii ku noqondoono ama ka sarrayn doono.
Si kastaba ha ahaatee, arrintani waxay kordhindoontaa qiimaha Sarrifka ee lacagta dollarka iyadoo sababtuna ay tahay Dollarka oo suuqa ku yaraan doona maadaama oo nin waliba uu imika rabo inuu jabnida kafaa’iidaysto oo uu gabbood (Hedge) ka dhigto lacagta adag ee Doolarka (The hard Currency).
W/Q-Dhaqaaleyahan –Xasan Cabdi Amman Golaha Wakiillada ee Gobolka Maroodi-jeex.